Abomfundaze bayazihlangula ekufeni komfundi - Ilanga News
Home Izindaba Abomfundaze bayazihlangula ekufeni komfundi
Abomfundaze bayazihlangula ekufeni komfundi
UMFUNDI waseThekwini College, uYonwaba Manyanya.
SIYAZIHLANGULA isikhwama sikahulumeni esixhasa abafundi abavela emindenini ehlwempu abafunda ezikhungweni zemfu-ndo ephakeme ngokushona kuka-Yonwaba Manyanya (26) obefu-nda eThekwini Tvet College nge-nyanga edlule okukhonjwe lesi sikhwama ngenjumbane ngoku-gqozisa uhlelo lokukhipha imali esiza abafundi kwaze kwenzeka lesi sigameko.
UYonwaba wase-Eastern Cape, ubenza iziqu ze-Electrical and Infrastructure Construction kulesi sikhungo, kanti kugxekwa iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ngokufa kwakhe.
Ngokubika kweTimeslive, wa-xoshwa emqashweni, wahlala ngaphandle isikhathi eside ngo-ba ingakhokhiwe imali ayeyikwe-leta umasitende. Kuthiwa yingoba iNSFAS ibingakhokhile.
Kuthiwa lo mfundi ubengakayi-tholi nemali yokudla kanti nesivumelwano sabo sokuxhasana nalesi sikhwama ngo-2021 besi-ngakaphothulwa. Le ndaba yokusolwa kwalesi sikhwama kuvela ukuthi ibixoxwa ezinkundleni zo-kuxhumana.
Ngokwesitatimende esikhi-shwe yilesi sikhwama, sithi: “Kunezinsolo emphakathini ezi-thi umfundi ushone ebulawa wu-kukhathala nendlala ngenxa yo-kuthi iNSFAS ihambise kancane ukukhokha imali ebhekelela ne-yendawo yokuhlala yalo mfundi, waze wahlala emgwaqweni esali-ndile okuyinto engesilona iqiniso, ngokobufakazi obuqukethwe yisikhungo (eThekwini College).
“Umfundi kumele akulungele ukukhokhelwa yiNSFAS ngokwe-migomo ethile ababekelwa yona okumele baphase ngayo. Lo mfu-ndi ubexhasiwe ngo-2020 kodwa ukuxhaswa kwakhe kulo nyaka ka-2021 bekungakaqinisekiswa.
“Kwesinakho okuphathelene nalo mfundi, wukuthi indlela aphase ngayo nyakenye beyingavumi ukuba axhaswe kulo nyaka. Ubebalwa nabafundi abayingxenye yesikole obekusacutshungu-lwa izinkinga zabo.
“Kubuhlungu ukuthi lesi simo si-beka kabi lesi si-khwama sikahulumeni emndenini womfundi nase-mphakathini, oku-ngesilona iqiniso. Lokhu kuwukudu-kisa umphakathi.”
Lesi sikhwama sidlulise amazwi enduduzo emnde-nini, sithi kakuka-caci ukuthi imba-ngela yokushona komfundi ngokuse-mthethweni ngabe yini.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo ephakeme uMnu Ishmael Mnisi, uthi uku-xhaswa komfundi nyakenye, kaku-chazi ukuthi nakulo nyaka ubezo-xhaswa.
Utshele ILANGA ukuthi abafundi babekelwe indlela okumele baphase ngayo izifundo zabo.
“Umfundi uma engaphasanga kwaze kwafika esigabeni esithile ekubeni efunda ngale mali, noma ehlulekile wukuphasa izifundo eziyisibalo esithile kulezi azenza-yo, iNSFAS kayimkhokheli. Nga-kho-ke kuningi okucutshungulwa-yo unyaka nonyaka,” kusho uMnu Mnisi.
Previous articleKubulawe ngesihluku isalukazi ebesihlala sodwa
Next articleKufezeke iphupho loSuthu ngeCaf